iPhone ကို Restart / Hard Reset / Reboot လုပ်နည်း -
iPhone ကို Restart / Hard Reset / Reboot လုပ်နည်း
ဒီတစ်ခါ Knowledge Sharing ပေးချင်တာကတော့ဗျာ။ iPhone တွေကို Reboot လုပ်တယ်လို့လဲခေါ်တယ်၊ Hard Reset လုပ်တယ်လို့လဲခေါ်တယ်၊ အဲ Restart လုပ်တယ်လို့လဲ ခေါ်ကြတဲ့ဟာကို လုပ်တဲ့နည်းလမ်းပါပဲဗျာ။
ဒါကတော့ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် Edit ပြန်လုပ်ပြီး တင်ပေးတဲ့ Post ပဲ ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ လက်ရှိ Latest အဖြစ် ထွက်ထားတဲ့ iPhone 11, iPhone 11 Pro နဲ့ iPhone 11 Pro Max တို့ကို Restart လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုပါ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ဘယ်လိုအချိန် ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာ ခင်များတို့၊ ကျနော်တို့ရဲ့ iPhone တွေကို Reboot လုပ်ဖို့ လိုအပ်နေတာလဲ ??
ဂိမ်းတွေကို မနားတမ်း တဆက်ထဲ တချိန်လုံး ဆော့နေမယ်ဗျာ။
fb ကို တမနက်လုံး၊ တညလုံး မနားမနေ ထိုင်ပွတ်နေမယ်ဗျာ။
ဒါမှမဟုတ် Movies တွေ တစ်ကားပြီးတစ်ကား ဒေါင်းလုတ်ဆွဲနေမိတယ်ဗျာ။
တစ်နေ့တစ်ရက်ထဲက ကိစ္စမရှိပေမယ့်။ နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုရင်တော့ ကိစ္စက ရှိလာပြီဗျ။ နည်းနည်းဟမ်းချင်လာပြီ။ စိတ်ထဲမှာလဲ အရင်လောက် သုံးရ ပြုရ စိတ်တိုင်းမကျသလိုမျိုး ခံစားလာရတော့မယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မရှိတော့ဘူး။ Pages အရွှေ့အပြောင်းတွေမှာ ထစ်ထစ်ထစ်နဲ့ ဂဂျိုးဂဂျောင် ဖြစ်ချင်လာတယ်ဗျာ။
ဒါဆို Reset ချလိုက်ရင် ကောင်းမလား ?
ဆိုတဲ့ အတွေးက ခေါင်းထဲ ရောက်လာပြီ။ အမှန်က Reset လုပ်ဖို့ အခြေအနေအထိ မရောက်သေးဘူးဗျ။ ဒီပြဿနာက Reboot လုပ်လိုက်ရုံနဲ့တော့ Errors Clear ဖြစ်တယ်။
အဲ .. iOS Version အသစ် တင်ပြီးလို့ လိုအပ်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်အချို့ကို install လုပ်ပြီးသွားရင်လည်း ဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့ပဲ Restart လုပ်လိုက်သင့်ပါတယ်ဗျ။ မလုပ်ခင် ဒီနေရာမှာ အကြံပေးချင်တာက ဘာပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမှ မရှိ၊ မတက်ဘူး ဆိုတဲ့ သူများကလည်း တစ်လမှာ ( ၂ ) ကြိမ်လောက်တော့ Reboot လုပ်သင့်တယ်ဗျ။
မနားတမ်း အချိန်ပြည့် Run နေခဲ့ရတဲ့ မိမိရဲ့ အမြဲတမ်းအဖော်မွန် အိုင်ဖုန်းလေးထဲက CPU တို့ ၊ Ram တို့၊ အခြားသက်ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းတွေကို Refresh ဖြစ်ဖို့ Reboot လုပ်ပေးပါမှ သူလဲ သူ့အစွမ်းအစကို အပြည့်အဝ ထုတ်ပေး၊ ထုတ်ပြနိုင်မှာပေါ့ ဟုတ်ဖူးလားဗျ။
ဒါနဲ့ AssistiveTouch ကနေ Restart ကို လွယ်လင့်တကူ လုပ်ပေးလို့ရတယ် မဟုတ်လားဗျ။ ဒါဆို ဒီခလုတ်တွေ နှိပ်ပြီး လုပ်ဖို့ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ No No လိုအပ်ပါသေးတယ်။
တစ်ခါတရံမှာ AssistiveTouch ကို မပြောနဲ့၊ Touch Screen ကို ထိတာ၊ ဖိတာကိုတောင် မသိတဲ့ ဟမ်းနေတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ Restart / Hard Reset / Reboot လုပ်ဖို့အတွက် ဒီခလုတ်တွေကို နှိပ်တတ်ဖို့၊ နှိပ်ဖို့ မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါတယ်။
ကဲ ဒီတော့ ဒီပို့စ်လေးကို Save ထားလိုက်ကြတော့ဗျာ။
အရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ iPhone Series အဟောင်းတွေကနေ iPhone 6S / 6S Plus အထိ …
Home Button + Power Button ကို တပြိုင်ထဲ နှိပ်ထားပြီး၊ Apple Logo ပန်းသီးပဲ့လေးပေါ်လာမှ နှိပ်ထားတာကို လွှတ်ပေးလိုက် ရပါမယ်။ သူ့ကိစ္စ သူလုပ်ပြီးလို့ ပြန်တက်လာရင် Reboot လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
iPhone7/7Plus မှာတော့ …
Volume Down + Power Button ကို တပြိုင်ထဲ နှိပ်ထားပြီး၊ Apple Logo လေး ပေါ်လာမှ ခလုတ်တွေကို လွှတ်ပေးပါ။ ဒါဆို Rebooting စလုပ်ပါပြီ။
iPhone 8 / 8 Plus / X တို့မှာတော့ …
Volume Up ကို တစ်ချက်နှိပ်၊ ပြီး Volume Down ကို တစ်ချက်နှိပ်၊ ပြီးတာနဲ့ Power Button တစ်ခုထဲကိုပဲ နှိပ်ထားပေတော့။ Slide to power off စာတန်းပေါ်လာရင်လဲ Power Button ကို မလွှတ်ပဲ ဆက်သာ နှိပ်ထား။ နောက်ဆုံး Apple ရဲ့ Logo လေးပေါ်လာတော့မှ ခလုတ်ကို လွှတ်ပေးလိုက်ပေတော့။ ဒါဆို Reboot ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
iPhone XS နဲ့ iPhone XS Max မှာ …
iPhone XS နဲ့ iPhone XS Max မှာ လုပ်ရမယ့် နည်းက Volume Up ကို တစ်ချက်နှိပ်။ ပြီး Volume Down ကို တစ်ချက်နှိပ်။ ပြီးတာနဲ့ Power Button ကိုပဲ နှိပ်ထားလိုက်ပေတော့။ Slide to power off စာတန်းပေါ်လာရင်လဲ Power Button ကို မလွှတ်ပဲ ဆက်သာ နှိပ်ထား။ Apple ရဲ့ Logo လေး ပေါ်သည်အထိ နှိပ်ရမှာနော်။ ပေါ်လာရင် လွှတ်လိုက်တော့။
iPhone 11 , iPhone 11 Pro နဲ့ iPhone 11 Pro Max တို့မှာလည်း …
Volume Up ကို တစ်ချက်နှိပ်၊ ပြီးရင် Volume Down ကို တစ်ချက်နှိပ်၊ ပြီးတာနဲ့ Power Button ခေါ် Side Button ကို ခပ်ကြာကြာဖိထား။ မလွှတ်လိုက်နဲ့။ Apple Logo လေး ပေါ်လာတော့မှ လွှတ်။ ဒါကို Restart / Hard Reset / Reboot လုပ်တယ်လို့ ခေါ်တယ်။
ကဲ အခုဆိုရင် ခင်များတို့၊ ကျနော်တို့ရဲ့ အိုင်ဖုန်းလေးတွေကို Reboot လုပ်လိုက်လို့ Refreshing ဖြစ်ပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ သုံးလို့ ရပြီပေါ့ဗျာ။
Previous iCloud ပေါ်မှ Data တွေကို Recover ပြန်ယူနည်း
Next Best Fun Photo Editing iPhone Apps